Haweeney Lagu Daray Isku-shaandhayn Lagu Sameeyay Taliyeyaasha Booliska Ee Degmooyinka Muqdisho.(Akhriso) | Awdalmedia.com
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya Bashiir Cabdi Maxamed Ameriko ayaa isku-shaandheyn ku sameeyey taliyayaasha saldhigyada Booliska Muqdisho qaarkood
Isbedelkaas ayaa saameeyey taliyayashii hore qaarkood oo xilalka laga qaaday, halka taliyayaal cusub lagu soo daray, iyadoo ujeedada arintan laga leeyahay lagu sheegay dardar gelinta amniga caasimada.
Dhamme Raxma Xasan ayaa ka mid noqotay taliyaasha la Magacaabay, waxana aad u soo dhaweyey Bulsahda ku nool degmada Shangaani ee Gobolkan Banaadir, waana markii ugu horeysay ee haweeney lagu soo daro taliyeyaasha booliska degmooyinka.
Taliska Booliska Soomaaliya ayaa maalmaahan waday qorsho horumarin iyo dib u dhis loogu sameynayo ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Liiska hoose ka akhriso Isbedelada lagu sameeyey talisyada Booliska Saldhigyada Muqdisho.
5.Taliyaha cusub ee degmada Kaaraan ayaa waxaa loo magacaabay Gaashaanle Canjeex oo ahaa Taliyihii Booliska degmada Wartana badda.